Xildhibaanad Huda Axmed Cali oo beenisay in seddax nin ay halmar isla guursatay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanad Huda Axmed Cali oo beenisay in seddax nin ay halmar isla guursatay (DHAGEYSO)
Xildhibaanad Huda Axmed Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada Somaliland ayaa markii ugu horeeysay ka hadashay warar maalmihii ugu dambeysay la isla dhex-maraayay.
Wararkaasi ayaa ahaa in xildhibaanad Huda Axmed Cali ay halmar isla guursatay seddax nin, iyadoona arrintaasi ku eedeysay inuu ka dambeeyay boqorka beesha ay kasoo jeedo oo lagu magacaabo Boqor Maxamed Jaamac.
Xildhibaanad Huda Axmed Cali ayaa ku eedeeysay in Boqor Maxamed Jaamac uu isaga mas’uul ka yahay wararka been abuurka ah ee iyada laga faafiyay, islamarkaaana tilmaamtay inay la xisaabtani doonto.
Sidoo kale, waxay xildhibaanada sheegtay in boqorka ay dadaaliin suuqa ugu jiraan, si ay ugu soo beeciyaan kursiga ay beesheeda ku meteleeyso Aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, xildhibaanad Huda Axmed Cali ayaa tilmaamtay in boqorku uu sidaan oo kale hore ugu soo sameeyay xildhibaanadii iyada ka horeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii qoraal uu baraha bulshada soo dhigay Boqor Maxamed Jaamac uu ku sheegay in xildhibaanad Huda oo iyadoo xaaskiisa ah ay labo nin kale la guursatay, taas oo keentay in su’aalo badan la iska weydiiyo sababta ku kaliftay in xildhibaanada ay arrinkaasi u sameeyso.